Maneran-tany : Tsy misy ny aina rehefa tsy misy ny rano · Global Voices teny Malagasy
Maneran-tany : Tsy misy ny aina rehefa tsy misy ny rano
Voadika ny 03 Oktobra 2010 14:33 GMT
Natao tany amin'ny Stockholm, renivohitr'i Soisy nanomboka ny 5 ka hatramin'ny 11 Septambra 2010 ny fihaonana faharoapolo amin'ny Herinandro Iraisam-pirenena ho an'ny rano (World Water Week) (WWW) nitondra ny lohahevitra hoe Ny Kalitaon'ny rano Tanjona-Fisorohana, Fampiasàna voalanjalanja sy fampihenana. Araka ny hevitr'ireo mpikarakara, “samy mitondra ny tsindrin'entany eo amin'ny habetsahana sy ny hatsaràn'ny loharanon-dranontsika na ny fanamboarana tanana, ny fambolena, ny indostria ary ny fiovaovan'ny toetr'andro.” Na izany aza, nalamina ny herinandro mba “hidirana lalindalina kokoa amin'ny fahalalana, ny fahazoan-kevitra amin'izany, ary ny fampandraisana andraikitra ny fiarahamonina manodidina ny rano amin'ilay fanamby izay mifandray amin'ny kalitaon'ny rano.”
Amin'ny farany, solontena maro no tonga niaraka tamin'ny Fanambaran'i Stockholm (Stockholm Statement) izay milaza fa ny fahaiza-mitantana ny loharanon-drano sy ny fiarovana ary fitsinjarana ny rano ara-dalàna ho azo antoka sy mifanaraka tsara amin'ny fahasalamana ihany no afaka hahatratrana ireo Tanjon'ny Fampandrosoana amin'ity taona arivo ity (Millennium Development Goals). Olona am-polo tapitrisany, indrindra ny vehivavy sy ny tovovavy , izay tsy mahazo rano araka ny tokony ho izy sy ara-pahasalamana, no manjary tsy mahazo tombontsoa, very hasina sy fiarovana ary fari-piainana sahaza.
Nizara ny raki-tsorany sy ny heviny tamin'ny aterineto ireo mpitoraka bilaogy izay nanatrika ny Herinandro Iraisam-pirenena ho an'ny rano. Mizara ny tantaran'ny herinandro Iraisam-pirenena ho an'ny rano natrehany i Duncan Mara.
Ny fandaharana tamin'ny Alahady :
Ny fandaharam-potoana ny hariva voalohany dia ny fizarana ny andiany faharoa amin'ny Fitaovana fampahafantaram-baovao (Second Information Kit) mikasika ny tari-dalan'ny Fampiasana tafahoatra ny rano [2006 WHO Wastewater Use Guidelines] – mbola tsy amin'ny aterineto aloha ( fa ity ny anjarako ). Mikasika ny fisafidianana ny maridrefy mora ampiasaina hijerena ny faran'ny ambony indrindra azo leferina amin'ny aretina no famelabelarana nataoko – izany hoe, ny DALY be indrindra mety ho very isan'olona isan-taona (per person per year -pppy) [Avy amin'ny mpandika: DALY dia mety ho ny fahelana velona angamba]. Ny mari-drefy niraisana nampiasaina tamin'izany tao anatin'ny 2006 WHO Guidelines izany dia 10−6 pppy , saingy toa nitarina loatra kosa izany, ary mari-drefim-pahaverezana 10−4 DALY pppy no hevitra natoroko satria izay no mahalaza kokoa ny tena zava-misy ara-epidemiolojika any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana sy any amin'ny firenena efa mandroso sasantsasany (oh, Aostralia sy Etazonia) izay tena mifanakaiky . [Miasa ihany koa izany amin'izao fotoana amin'ny Tari-dàlana hananana Rano Fisotro manana Kalitao (Drinking-water Quality Guidelines), nefa tena mbola ankamantatra izany – ho an'ny WHO, US EPA ary ny EU, ankoatr'ireo maro hafa − izay mbola miandry ny ho fanokafana …]
Natrehiko ny fotoan-dehibe niarahana nisakafo atoandro sy ny resadresaka mikasika ny “Inona ny fahaizana tokony ananantsika mba hanatsarana kokoa ny Fahasalamana? “. Nitodika kokoa tamin'ny fanehoana ny fahitàn'ny Sekolin'ny Fahadiovana sy ny Fanafody Tropikaly avy any Londona sy ireo mpiara-miasa aminy ny mety ho fivoaran'ny Fikambanan'orinasa izay naorin'ny DFID mikasika ny ‘ Fahasalamana sy Fahadiovana Ampiharina amin'ny Fikarohana ny fitovian-jo’ (‘Sanitation and Hygiene Applied Research for Equity -SHARE) . Jereo ny tranonkalan'ny SHARE rehefa manomboka mandeha izany amin'ny faran'ny volana (mandra-pahatongan'izay, ireto misy antsipiriany vitsivitsy).
Avy eo, ny hariva aho nandeha tany amin'ny seminera mikasika ny “olana hita amin'ny kalitaon'ny rano sy ny fomba vaovao hiatrehana izany any Amerika Latina ”. Taratasy roa hafa kely – ny iray mikasika ny rano sy ny olan'ny fandanindaniam-poana ny rano any amin'ny tanànan'i Meksika avy amin'i Dr Blanca Jiménez (UNAM). Ny iray hafa kosa avy amin'ny Profesora Eduardo Jordão (Anjerimanontolo Federalin'i Rio de Janeiro) mikasika ny fampiasana ny UASBs any Brezila miampy ny endrika sasany amin'ireo fikarakarana madinidinika mamatsy vahoaka miisa 20,000−1,500,000 – nefa zara raha misy filazana kely mikasika ny sarany na ny tena fandehan'ny sarany, fa tsy misy fampahafantarana ny tahan'ny haavon'ny bakteria ao anatin'ny dobo.
Satria moa nanenjika ny fotoana fisakafoanana atoandro hatramin'ny fandaharam-potoana ny hariva ny tenako, dia nosisihan'i Dr Jan-Olof Drangert (Anjerimanontolon'i Linköping, Soisy), namako mpiara-mivory amiko, taratasy ny tanako – mikasika izay rehetra momba ilay tranonkalany vaovao miresaka Fahasamalana Maharitra ho an'ny taonjato faha 21, izay ahitana e-boky maimaim-poana ary fitambarana famelabelarana amin'ny PowerPoint ho an'ny fampiofanana ny matihanina eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny rano. Misy ny fanamafisana sasantsasany mikasika ny EcoSan , nefa tena ilaina mihitsy ny mijery izany tsara. Afaka maka izany PowerPoint izany ho antontan-taratasy ianao amin'izay mba afaka mampiasa azy ireo arak'izany na koa misafidy amin'izay fampisehoana tianao ampisehoana amin'ny famelabelarana izay ataonao . Hevitra tena mety!
Nandeha tamin'ny atrik'asa mikasika ny ” Fampiasana ny rano voavoatra araka ny tokony ho izy amin'ny alalan'ny fanodinana sy ny fampiasana indray” ny tenako ary nanao famelabelarana mikasika ny fomba fikarakarana ny rano efa niasa ara-boajanahary ary koa ny fisintonana ny karbona. Nilaza taminay ny Profesora Emeritus Takashi Asano (UC Davis), tao amin'ny lahateniny nandritra ny famelabelarana , mikasika ny tinady ara-drano sy ny fanodinana ny rano efa niasa ary ny fampiasana izany indray any Californie – foto-drafitrasa sarotra nila nanamboarana tanàna goavana (Los Angeles) tany an-tany efitra ary nataon'i Californie izay nanjary mpamokatra vaventy ny sakafo an-databatra (legioma sy voankazo ). Avy eo nanolotra famelabelarana mahaliana mikasika ny fiompiana anaty rano efa niasa i Dr Ashley Murray (UC Berkeley) : manangana orinasa kely hiompiana trondro amin'ny fotoana fanatodizany ary mamerina ny antsasany amin'ny tombony mazava ho amin'ny asa fikarakarana ny rano efa niasa avy eo ny orinasa (mampiasa ireo fanatodizana maharitra) hanampiana ny fandoavana ny O&M – fomba fijery tena mety tsara izay nampihariny tany Ghana.
Fa inona kosa no fiantraikan'ny tsy fahampian-drano any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana ? Manasongadina lahatsoratra mikasika ireo olana atrehan'ny vehivavy any Afgooye, Somalie, toerana izay ahitana fianakaviana maro tsy mahazo rano madio sy ara-pahasalamana, ny lahatsoratra manokana ao amin'ny Gazety Boky Etiopiana . Mivaky toy izao ny lohatenin'ny lahatsoratra “Herinandro iraisam-pirenena ho an'ny rano any Somalie: “Rehefa tsy misy ny rano, dia tsy misy ny aina ”:
Tsy misy ny sekoly, tsy misy ny lava-piringa, na mba toera-pivoahana tsaratsara any an-toby, ankoatr'ireo toera-pivoahana any amin'ny tranobe efa tranainy. Miatrika ny tsy fahampian'ny rano izahay eto. Mila mividy rano izay 15,000 shilling ny iray barika (latsaka kely fotsiny ny 10 dolara amerikana) izay entin'ny sarety tarihin'ampondra satria tsy misy rano mikoriana anaty lakan-drano tsinona any an-toby.
Anisan'ny ekipan'ny haino aman-jery tamin'ny Herinandro Iraisam-pirenena ho an'ny rano i Victor Kaonga, Mpanoratra ao amin'ny Global Voices. Ao amin'ny lahatsoratra mikasika ny Rano Mankarary hamafisiny ny filàna na izany ho an'ny governemanta na ny mponina any Malawi mba hifantoka amin'ny antsoina hoe Rano Mankarary :
Any Malawi, zavatra rehetra ny rano – politika, fahasalamana, ara-toe-karena, sosialy, zo, Tanjona ho Fampandrosoan'ny Taonarivo MDG, ny mahalahy na vavy, fanahy, olana ara-akademika, sns. Mila fomba fijery misandrahaka amin'ny lafiny maro ny fandinihana ny olan'ny rano.
Ny antontan'isa – na tsara jerena toy inona aza dia tsy milaza ny zava-drehetra any Malawi. Nilaza ny masoivohom-paritra ao amin'ny Water Aid Robert Kampala fa tsikaritr'i Malawi fa dingana lehibe maromaro no vita nahafahana niantoka farafaharatsiny hahazoan'ny 70 isanjaton'ny mponina rano madio ara-pahasalamana, mbola mila asa maro anefa i Malawi amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny rano . Saino hoe mahare isika fa 65%n'ny velaran-tany no rakotry ny famatsian-drano raha toa ka 86% ny an'ny Fahasalamana fototra. Ny tena mahagaga, fantatro izao fa ao amin'ny faritra an-drenivohitra sy ambanivohitra, 65% sy 46% fotsiny ny fanavaozana ara-pahasalamana / manara-penitra (ny lava-piringa fototra vita simenitra sy toera-pivoahana misy rano)! Tena mampalahelo. Dia mankaiza izany ny ambiny rehefa tsy misy toera-pivoahana ? Ary ahoana ny fiantraikan'izany any amin'ny ranontsika?
Any amin'ny lahatsoratra hafa, hoy izy manontany , “Fantatrao ve ny fitaovana ara-pahasalamana vitsy mpanana indrindra?”:
Ny toera-pivoahana no fitaovana vitsy mpanana indrindra maneran-tany. Manodidina ny 2.6 lavitrisa no tsy manana toeram-pivoahana. Tena ratsy be ny olana mianjady any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana ateraky ny foto-drafitrasa ara-pahasalamana tsizarizary. Fa avelao aho hisaina malakilaky ny toera-pivoahana any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana. Ahitàna kirihitra maro azo iafenana any ary ampiasaina ho toera-pivoahana. Tsy afaka manao izany ianao any amin'ny toerana voavoatra tsara amin'ny faritry ny tanan-dehibe. Noho ny tsy fisian'ny lamina any amin'ny tanàna sasany no mahatonga ny foto-drafitrasa ara-pahasalamana tsizarizary. Raha izaho manokana aloha dia tsy tia trano baoritra e. Ankoatr'ireo dia misy amin'ireo kolotsaina sasany no toa tsy rototra loatra amin'ny toera-pivoahana. Eo amin'ny sehatry ny fiaraha-monina, misy rafi-pitantanana sasany no tsy manana ihany koa ny kolotsaina mikasika ny toera-pivoahana.
Navelan'ny Herinandro Iraisam-pirenena ho an'ny rano 2010 hanana fanontaniana maro tsy voavaly i Timothy Karpouzoglou :
Vita iny ny Herinandro Iraisam-pirenena ho an'ny rano 2010 ( World Water Week -WWW), mamela ahy amin'ny fanontaniana sasany tsy misy valiny. Mikasika ny “fanokafana ” ve sa ” ny fanakatonana” ny adihevitra mikasika ny fitantanana ny loharanon-drano ny WWW?
Ny lohahevi-dehibe tamin'ny WWW-n'ity taona ity dia ny kalitaon'ny rano. Ny tanjon'ny WWW dia ny “mba hanasongadina hetsika mitera-bokatra sy fomba fisainana vaovao mifandraika amin'ireo fanamby momba ny rano sy ny fiantraikan'izany amin'ny tontolo iainana manerantany” ary koa ny mba “hidirana lalindalina kokoa amin'ny fahalalana, ny fikarohan-kevitra amin'izany, ary ny fampandraisana andraikitra ny fiarahamonina manodidina ny rano amin'ilay fanamby izay mifandray amin'ny kalitaon'ny rano.” Zava-manahirana mitombina sy faran'izay maika avokoa ireo amin'ny fanohizana ny adihevitra.
Ka inona ary ilay fomba fisainana vaovao ? Azo jerena ihany ny sasany amin'izy ireo ho toy ny fomba fisaina taloha izay nohavaozina niaraka tamin'ny politika ankehitriny amin'ny teny vaovao. Ny siantifika foana no mpanapa-kevitra amin'ny “kalitaon'ny rano”, izay iantsoana ny siantifika hitady vahaolana ara-tsiansa ho vahaolana . Ny fototry ny olana matetika dia mikasika ny teknolojia tena mifanandrify/ilaina. Matetika no vahaolana aroso ny fanaovana ozinina fikarakarana ny riandrano sy ny rano efa niasa sy ozinina fikarakarana amin'ny rano efa nampiasaina, eny fa na dia lafo aza ny sarany mitambatra ary tena tsy ho vita mihitsy any amin'ny faritra sasany amin'ny tontolo an-dalam-pandrosoana.
Milaza i Jeremy Allouche fa vondron'ny tampom-pahaizana ny Herinandro Iraisam-pirenena ho an'ny rano :
Ity ny bilaoginay voalohany avy aty amin'ny Herinandro Iraisam-pirenena ho an'ny rano – ny sasany miantso azy hoe ‘ny fivahinianana masin'ny rano ’. Eny … mahatonga azy ho sarotra atrehana ny saran'ilay fivahinianana (manodidiana ny £650) ary ary izay no mahatonga azy ho vondron'ny tampom-pahaizana. Amin'ity fomba fijery ity, manontany tena foana ny olona hoe inona no tena ilàna ity fotoan-dehibe iraisam-pirenena ity na hoe tsy ny zavatra teo ihany no miverimberina foana.
Matetika no tena hita be ny tsy fifanohizan'ny kaonferansy sy ny tontolo any ivelany : raha toa ny haino aman-jery iraisam-pirenena ka mitatitra vaovao mikasika ny tondra-drano tany Pakistana sy ny haintany tany ary ny tondra-drano tany Nizera, ny eto kosa ny tena ifantohan'ny kaonferansy dia mikasika ny fiaraha-miasa eo amin'ny matihanina amin'ny rano sy ny tetikasa manodidina ny hevitra mampilendalenda momba ny rano. Na dia ny kalitaon'ny rano aza no tena ivon'ny kaonferansy, mbola lohahevitra nafana hafa ihany koa ny fiovaovan'ny toetr'andro: ny fanomezan-danja ny rano amin'ny ankapobeny ary ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny fitantanana sy ny fahafahana manangana ho an'ny rano sy ny toetr'andro, sns …
Na izany aza, ny tena nasongadina be tamin'ny maraina aloha dia ny fandaharana mikasika ny “Fijerena indray ny fifandroritan-kevitra manodidina ny tohodrano”. Na dia voakiana aza ny tatitry ny Komisiona iraisam-pirenena mikasika ny Tohodrano (World Commission on Dams -WCD) (indrindra manodidina ny fametrahana ny torolalana ), nisy ihany ny marimaritra niraisana mikasika ny fitsipika sy ny soatoavina izay natolony. Ankehitriny anefa, miaraka amin'ny fandrafetana tetikady momba ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fahatongavan'ireo mpamatsy vola vaovao, manahy ny sasany fa mety hamarana ity marimaritra iraisana ity ilay fepetra vaovaon'ny (WCD+10).
Miresaka i Lyla Mehta mikasika ny fifanoheran-kevitra ao amin'ny kaonferansy :
Androko fahaefatra amin'ny Herinandro Iraisam-pirenena ho an'ny rano androany, ny Lameka isan-taonan'ireo mpandrafitra ny politika sy ny mpilalao avy amin'ny Filan-kevitra Iraisam-pirenen'ny rano, ny Fandaharanasa momba ny Rano sy ny Fahasalamana ( Water and Sanitation Programmes -WSP), ny Ivontoerana momba ny rano ao Stockholm , WaterAid, ny Rafi-pitantanana Iraisam-pirenena misahana ny Rano [International Water Management Institute (IWMI)] , ary maro koa avy amin'ny Firenena Mikambana sy ireo masoivoho miara-miasa toy ny DFID sy ny hafa izay afaka nandoa ny saram-pidirana. Toa tonga mba hiserasera amina tambajotra, hanao fihaonana, hisakafo sy hisotro, handefa soso-kevitra sy hitati-baovao… ny ankamaroan'ny olona ary indraindray aza mba hanatrika ny fotoana tsotra fotsiny.
Nanao toy izany koa aho, na dia mba nanantena ny ho liana kokoa amin'ny fandaharana sasany sy ny atrikasa sasany aza. Saiky resaka teknika avo lenta ny ankamaroan'izy ireny, miaraka amin'ny tanjona mitovy ho an'izao tontolo izao sy ny fanambarana fa re hatry ny ela. Fa mety ho taratry ny firehana mibahan-toerana eo amin'ny resaka momba ny rano izany, na izany any anaty haino aman-jery, politika na seha-pikarohana…
Amiko, ny tena nisongadina tamin'ilay kaonferansy dia ny fotoana mikasika ny “Fijerena indray ny fifandroritan-kevitra manodidina ny tohodrano ” nampiantranoin'ilay tranonkalam-baovao malaza Water Alternatives. Efa ho 10 taona izao no namoahan'ny Kaomisiona Iraisam-pirenena misahana ny Tohodrano ny tatitra nampiavaka azy, izay nanome torolalana amin'ny fanamboarana tohodrano,ny fiahiana ara-tsosialy, ara- tontolo iainana, ara-toekarena ary araky ny rafi-panjakana. Izay ihany no fotoana tokana natrehako ka nahitako tsirony sy adihevitra, izay tsy mahagaga noho ny lohahevitra na dia teo aza ireo olona vitsy izay nanantena tsaratsara kokoa! Folo taona no lasa, nisy fivoarana betsaka. Efa mihodina anaty tetikasa vaovao maro sy miasa eran'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao ireo torolalana WCD. Efa mihamahazo vahana ihany koa amin'ny fikambanana sy rafitra iraisam-pirenena ny foto-kevitry ny WCD mikasika ny “zo hanaiky”.
Nefa, mbola maro ireo hevi-dehibe ifandirana ary ireo marimaritra iraisana tsy dia mazava loatra momba izay lalan-kizorana, sady misy ireo mpanohitra amin'ny ora farany izay manda foana ny rafi-pandaminan'ny WCD sy ny fehin-keviny farany. Nanjary ohatra izay amin'ny tenin'ny mpiasan'ny Banky mondialy John Briscoe, izay nirehareha ery nilaza fa ny WCD sy ny kaomisiona toa azy dia tokony hangoron'entana satria lavin'ireo firenena mpanao tohodrano izay torolalana arosony. Saingy toa hita ho tsy manao dia kely akory aza ho amin'izany zotra izany na i Briscoe tenany na ireo rafitra teo alohany fa manohy tsy te hahalala ny tena zava-misy hoe ny fivoaran'ny resaka loharanon-drano dia dingana iray misedra fanoherana ara-politika any amin'ny sehatra avo izay mazàna no iharan'ny tsindry aloky ny hery goavan'ny politika sy toe-karena. Ankoatr'izany mety tsy haneho ny tombontsoan'ny mahantra sy tsy manam-bola akory izay voahilikilika noho ny fivoarana mifototra amin'ny fananganana tohodrano ireo governemanta tatsimo izay misora-tena ho ‘demokratika’.
Tamin'ny faran'ny Herinandro Iraisam-pirenena ho an'ny rano tany Stockholm no nipoiran'ny fifanarahana mikasika ny marimaritra iraisana momba ny olana maro mifandray amin'ny rano toy ny taterin'i Alex McIntosh:
Tamin'ny andro fahaefatra, kaonferansa natrehan'ny olona 2,500, lohahevitra vitsivitsy no nanomboka niseho. Voalohany, mikasika ny ankamaroan'ny fiahiana ny rano maneran-tany, kely fotsiny no fantatsika mikasika ny hadirin'ny tahirin-drano, ny hadirin'izay nalaina tamin'izany mba hampiasain'ny olona, na ny kalitaon'ny rano. Noho izay antony izay, nanaiky daholo ny mpamelabelatra rehetra tao amin'ny seminera On the Road the Corporate Water Reporting [Mizotra mankamin'ny Fametrahana Tatitra Ara-dalàna momba ny Rano], ny vahiny nasaina avy amin'ny Nature Conservancy, CERES, Quantis, PepsiCo, CH2M HILL, Unilever, Borealis ary ireo fikambanana hafa , fa tokony hitohy ny fironana mankany amin'ny fangaraharahana mikasika ny fitaterana ny rano be, voalohany izay tantanan'ireo mpandraharaha mila mahazo sy mitantana ny famatsian-dranon-dry zareo, ary eo andaniny ny tsindry avy amin'ny mpanjifa/mpividy/mpamatsy vola/tompony.
Ny lohahevitra faharoa nivoitra avy tamin'ny Herinandro Iraisam-pirenena ho an'ny rano dia ny fisian'ny marimaritra iraisana ankapobeny teo amin'ireo manam-pahaizana maneran-tany mikasika ny rano ary nilaza fa efa nihoatra ny “fetra mahasalama” ny olombelona mikasika ny fampiasana araka ny tokony ho izy . Tao amin'ny seminera The Future of Global Water Technologies [Ny hoavin'ny Teknolojia Manerantany momba ny Rano], nivoaka avy amin'ny resadresak'ireo vahiny avy amin'ny McKinsey & Co, ITT, Black & Veatch sy ny hafa ny teboka efatra nifanekena:
* Miatrika olana goavana amin'ny resaka loharanon-drano izao tontolo izao ankehitriny, ary mbola hiharatsy kokoa izany amin'ny taona ho avy .
* Tsy hanentsina ny “rano banga” ny fomba fanao mahazatra ataon'ireo mpandraharaha
* Lafo vidy, mety hisy vahaolana maharitra ihany , nefa mila fomba fijery mivelatra be ara-toekarena .
* Misy làlana iray mankany amin'ny sehatra fanodinana ny rano